၁၅။ ရဟန်းဘဝ Monkhood (saṅgha) 僧伽 (僧) - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
၁၅။ ရဟန်းဘဝ Monkhood (saṅgha) 僧伽 (僧)
Posted by ukkmaung on October 14, 2014 at 12:11pm
ရဟန်းဘဝသို့ ရောက်လာပြီဖြစ်သော ဘုရားလောင်းသည် အနုပီယ သရက်တော၌ ခုနှစ်ရက် နေတော်မူသည်။ ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင် ထိုအရပ်မှထွက်ခွါလာရာ ရာဇဂြိုဟ်သို့ ရောက်လာသည်။
မြို့တွင်းသို့ဝင်ကာ အိမ်စဉ် တစ်လျှောက် လှည့်၍ ဆွမ်းခံသည်။ ထူးခြားသော ရုပ်သွင်ကြောင့် တစ်မြို့လုံး အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးမျိုး ထင်မြင် ပြောဆိုကြသည်။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည့်ရှင် ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးလည်း နန်းတော်ပေါ်မှ လှမ်းမျှော်ကြည့်ပြီးလျှင် မင်းချင်းတို့ကို လိုက်လံစုံစမ်းစေသည်။
" အချင်းတို့ လိုက်လံကြည့်ကြ။ မြို့ပြင်သို့ရောက်ပါက...နတ်ဖြစ်လျှင် ကောင်းကင်သို့ ပျံတက်လိမ့်မည်။ နဂါးဖြစ်လျှင် မြေထဲသို့ ငုပ်လျှိုသွားလိမ့်မည်။ လူဖြစ်လျှင် ရသမျှဆွမ်းကိုသုံး ဆောင်လိမ့်မည်။
15။ Monkhood (saṅgha)
The Bodhisat making himself intoamonk, resided at the Anupiya mango forest for seven days. On the eight day he departed from that place and going forth reached Rājagaha city.
Entering the city. He went round the city accepting offering of food from the house in traditional order. Because of his extraordinary looks and personality the whole city was in an uproarous state and the citizens talked about him with various opinions. King Bimbisara , king of Rajagaha looking out from the palace let his attendants enquire about him.
" Oh attendants! follow him and look what he does, if he isacelestial being he will ascend to the sky; if he isadragon he will immerge into the earth, and if heahuman being he will partake of the food received."
該菩薩 (巴Bodhisatta) 使自己成為一個和尚，居住在阿努比亞 芒果園 (巴Anupiya)芒果林中七天。在八天他從那個地方出發，外出來回達到王舍城的城 (巴Rajagaha) 市。
進入城市。他又一輪的食品從房子在傳統秩序的城市接受的產品。因為他過人的外貌和個性的整個城市是在一個哇啦狀態和市民談起他與各種各樣的意見。頻婆娑羅(巴Bimbisara)王，王舍城 (巴Rajagaha) 的王從禦看著外面讓他的服務員打聽他。